I-Pantheon: I-WordPress enzima noma i-Drupal Hosting nge-New Relic | Martech Zone
NgoLwesine, Juni 23, 2016 Douglas Karr
Sine-plugin engu-47 esebenzayo ekufakweni kwethu kwe-WordPress. Lawa ma-plugins amaningi, amaningi awo angahle anciphise ukusebenza kwe-WordPress. Senza izivivinyo ezisheshayo zejubane ngaphambi kokufaka ama-plugins, noma singahle sisebenzise amanye ama-logic ukumane sibuyekeze ingqikithi yethu ngakho isebenza ngokushesha futhi ayikhokhisi kakhulu kumaseva ethu. Isivinini sibalulekile kulezi zinsuku - zombili zisuka engxenyeni yokuhlangenwe nakho komsebenzisi kanye ne-engeli yokusebenzisa injini.
Ukube benginesikhalazo ngokujwayelekile amapulatifomu wokubamba, kungenxa yokuthi akuvumeli ukuthi uxazulule inkinga futhi ukhombe imibuzo nezimpahla nokuthi ziluthinta kanjani uhlelo lwakho lokuphathwa kokuqukethwe. Okuthile okulula njengokulungisa i-database yakho kunganciphisa isikhathi esithathwa ngamakhasi akho ukulayisha ngengxenyana ethile. I-Pantheon iyashintsha lokhu!
onkulunkulu iyipulatifomu yokubamba esezingeni eliphakeme yonjiniyela we-WordPress nabakwaDrupal. I-Pantheon inikeza amaqembu wewebhu wonke amathuluzi wonjiniyela, ukusingathwa, ukukala, ukusebenza, ukuhamba komsebenzi, kanye ne-automation abakudingayo ukwakha amawebhusayithi amahle kakhulu emhlabeni.
Phatha Amasayithi Kalula - Phatha wonke amasayithi wakho we-WordPress neDrupal kusuka kudeshibhodi eyodwa. Hlanganyela kumaphrojekthi kalula phakathi kwamalungu eqembu.
Shintsha i-DevOps - Zikhulule ekulondolozweni kweseva. Vumela i-Pantheon automate sysadmin isebenze— ungagxila ekuthuthukiseni amawebhusayithi amahle.
Ukuhamba komsebenzi kwe-Agile Ngempela - Push izinguquko ngokushesha futhi kaningi. Sebenzisa ukuhlanganiswa okuqhubekayo nokulawulwa kwenguqulo kanye ne-out-of-the-box dev, test, nezindawo ezibukhoma.
Ngamandla ahlanganisiwe we IPantheon kanye neNew Relic Pro, amakhasimende ethu anamathuluzi wokwakha, ukuqalisa, nokusebenzisa amawebhusayithi amahle, ngokushesha futhi ngaphandle kokukhathazeka, ngokusebenza okuphezulu. INew Relic Pro ingumphelelisi ophelele wesikhulumi sePantheon futhi siyajabula ukunikela ngale ntuthuko ekhethekile, yokuphela kokuphela kwewebhu futhi analytics Suite ngaphandle kwezindleko ezengeziwe kubasebenzisi be-Pantheon. UZack Rosen, Umsunguli kanye ne-CEO yePantheon
Abasebenzisi be-Pantheon manje sebengaqinisekisa ukusebenza kwewebhusayithi okuphezulu kakhulu kuzo zonke izigaba zokukhiqiza - kusuka entuthuko kuya ekushicilelweni bukhoma. Ukusebenza okubalulekile kufaka:
Ukubonakala kwezinga lekhodi inika amandla abasebenzisi ukukhomba imbangela yezinkinga zokusebenza, kuze kufike ocingweni lomsebenzi, ukuze kuhlonzwe kahle futhi kuxazululwe inkinga.
Ukumakwa kokuthunyelwa ivumela abathuthukisi ukuthi babheke ukusebenza ngokuhamba kwesikhathi futhi bakhombe ngokushesha izici eziyinkinga.
Ukufinyelela ku-New Relic kuyo yonke imvelo yentuthuko - Izindawo ze-Multidev, i-Dev, i-Test, ne-Live – inika amandla abasebenzisi ukuthi babambe izingqinamba zokusebenza ngaphambi kokuthi baphile futhi bathumele ngokuzethemba.
Abasebenzisi be-Pantheon bazothola ukufinyelela ku-New Relic APM Pro ngokushesha futhi bangafinyelela ekusebenzeni kwesayithi analytics kudeshibhodi yesikhulumi se-Pantheon.
Tags: sishayeukuthunyelwa kwekhodiDrupalukuthuthukiswa DrupalI-Newicicokusha relic proisizunguukuphathwa kwewebhusayithiWordPressukuthuthukiswa kwe-wordpressi-wordpress hostingukusebenza kwe-wordpress
Ukumaketha Okuhlangene kanye Nokuhambisana kwe-CAN-SPAM